မိခင်နို့ တစ်မျိုးတည်းသာ တိုက်ကျွေးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ - Hello Sayarwon
Dr. Aung Myat Thu မှ ရေးသားသည်။ 06/08/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးခြင်းသည် မွေးကင်းစကလေးငယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစာအာဟာရများကို ဖြည့်တင်းပေးသည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် မိခင်အတွက် သိသာထင်ရှားသော ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများစွာ ပေးစွမ်းပါသည်။
သိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးချက်များအရ မွေးခါစပထမ ၆ လတွင် မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းသာ တိုက်ကျွေးခြင်းသည် မွေးကင်းစကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီအချိန်ကျော်လွန်သွားပြီးလျှင် ကလေးငယ်ကို ဖြည့်စွက်စာ စတင်ကျွေးရမည် ဖြစ်ပြီး မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းကို ၂ နှစ် ထက်ပို၍ တိုက်ကျွေးနိုင်သည်။
ရင်သွေးအတွက် မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေက ဘာလဲ
မိခင်နို့တွင် ရင်သွေးငယ်ရင်သန်ကြီးထွားရန် အာဟာရဓါတ် အလုံအလောက်ပါရှိသည်။ မိခင်နို့သည် ဗီတာမင်၊ ပရိုတင်း(အသားဓါတ်) နှင့် အဆီဓါတ်များ အပြည့်စုံဆုံးနီးပါး ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ ပါဝင်သော အစာအာဟာရအားလုံးသည် ကလေးဖြည့်စွက်စာဖော်မြူလာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ အစာကြေလွယ်နိုင်သည်။
မိခင်နို့တွင် ဗိုင်းရပ်စ် နှင့် ဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော ခုခံအားကောင်းစေသည့် ပစ္စည်းများ (Antibodies) လည်းပါဝင်သည်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသော ကလေးငယ်များသည် ရင်ကြပ်ရောဂါ နှင့် အခြားဓါတ်မတည့်သောရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။
မွေးခါစ ပထမ ၆ လအတွင်း မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းသာ တိုက်ကျွေးထားသော ကလေးငယ်များသည် နားကူးစက်ရောဂါပိုး၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော၊ ဆေးရုံတက်ရခြင်း နှင့် ဆရာဝန်ဆီသို့ သွားရောက်ရခြင်း စသည်တို့ အဖြစ်နည်းကြသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် ကလေးငယ်၏ ဉာဏ်ရည် (အိုင်ကျူ) ဖွံ့ဖြိုးမှု နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ကလေးငယ်၏ ကိုယ်အလေးချိန်ကို မှန်ကန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ ထို့အပြင် ရင်သွေးငယ် နှင့် မိခင်ကြား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့ရင်းနှီးမှု ပိုမိုများစေပြီး သံယောဇဉ်ပိုမိုရှိစေသည်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) ဟုခေါ်သော ရုတ်တရက် ရင်သွေးငယ်သေဆုံးခြင်းရောဂါ ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးခြင်းသည် မိခင်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိစေသလား
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် အမြင်အရ ပင်ပန်းသောအလုပ်မဟုတ်ဟု ထင်ရသော်လည်း မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် ကယ်လိုရီကို အနည်းငယ်ထိရောက်စွာ လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသော မိခင်သည် ကိုယ်အလေးချိန်အကျမြန်နိုင်သည်။
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းသည် အောက်စီတိုစင်ဟော်မုန်းထွက်ခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး သားအိမ်ကို မူလအရွယ်အစားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း နှင့် မီးဖွားပြီး သားအိမ်မှ သွေးသွန်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသော မိခင်သည် ရင်သားကင်ဆာ၊ သားဥအိမ်ကင်ဆာ နှင့် အရိုးပွရောဂါဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းပါးသည်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ကလေးဖြည့်စွက်စာဖော်မြူလာများ ဝယ်ယူရန်မလိုအပ်သောကြောင့် အချိန်နှင့် ငွေကုန်ခြင်းကို သက်သာစေသည်။
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသည့် အချိန်ကို အနားယူသည့်အချိန်အဖြစ်နှင့် ရင်သွေးအတွက်အချိန်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။
ကလေးအသက် ၆ လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက်ကျွေးခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အကြံပြုချက်များ။
၁။ မွေးပြီးပြီးခြင်း တစ်နာရီအတွင်း မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရမည်။ အစတွင် မိခင်နို့ထွက် နည်းနေနိုင်သော်လည်း ရင်သွေးငယ်၏ အစာအိမ်သည် မကြီးမားသေးသောကြောင့် အဆင်ပြေပါသည်။
၂။ ရင်သွေးငယ်ကို အခြားသော အစာ၊ အရည် နှင့် သောက်ရေ ပင် မတိုက်ကျွေးရပါ။ ဆရာဝန်မှ ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်နှင့် အကြံပေးထားသော ဖြည့်စွက်စာ ဖော်မြူလာမဟုတ်လျှင် မိခင်၏ နို့ထွက်မှုကို အနှောက်အယှက်ပြုနိုင်သောကြောင့် ရင်သွေးငယ်ကို အခြားဘာမှ မတိုက်ကျွေးပါနှင့်။
၃။ ရင်သွေးငယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလောက် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးပါ။
၄။ ကလေးချိုလိမ်အသုံးပြုခြင်းကို နောက်ဆုတ်ထားပါ။ ကလေးချိုလိမ်စုပ်ယူနေခြင်းသည် ဗိုက်ဆာခြင်းကို လျော့ကျစေပြီး ရင်သွေးငယ်၏ မိခင်နို့ဆာလောင်ခြင်းကို အာရုံပြောင်းသွားစေသည်။
Exclusive breastfeeding. http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/en/. Accessed
Breastfeeding Overview. https://www.webmd.com/parenting/baby/nursing-basics#5- 11. Accessed
31 Breastfeeding Secrets. http://www.parents.com/baby/breastfeeding/tips/secrets-for-
breastfeeding-success/. Accessed 2017.
မိခင်နို့ ရည်မှာ ဘာတွေပါနေလို့ ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရတာလဲ။